Phaseolin အမှုန့် (13401-40-6) hplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Phaseolin အမှုန့်
SKU: 13401-40-6. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Phaseolin မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (13401-40-6) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Phaseolin အမှုန့် ဘုံ bean ကို (Phaseolus vulgaris အယ်လ်) မျိုးစပါး၏ပရိုတိန်းသိုလှောင်မှု vacuoles အတွင်းစုဆောင်းတဲ့ trimeric glycoprotein ဖြစ်ပါတယ်။ proteolytic ပျက်စီးခြင်းဖို့ခုခံပရိုတိန်းသိုလှောင်မှု vacuoles အတွက်၎င်း၏အတည်ငြိမ်စုဆောင်းခြင်းခွင့်ပြု, ဇာတိ phaseolin အမှုန့်၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ကုန်ကြမ်း Phaseolin အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Phaseolin အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 177-178 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကိုယ်အလေးချိန်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Phaseolin အမှုန့်
Phaseolin အမှုန့် (CAS 13401-40-6)
ကုန်ကြမ်း Phaseolin အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Phaseolin အမှုန့်ဘုံ bean ကို (Phaseolus vulgaris အယ်လ်) မျိုးစပါး၏ပရိုတိန်းသိုလှောင်မှု vacuoles အတွင်းစုဆောင်းတဲ့ trimeric glycoprotein ဖြစ်ပါတယ်။ proteolytic ပျက်စီးခြင်းဖို့ခုခံပရိုတိန်းသိုလှောင်မှု vacuoles အတွက်၎င်း၏အတည်ငြိမ်စုဆောင်းခြင်းခွင့်ပြု, ဇာတိ Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ တစ်ဦး protease-ခံနိုင်ရည်ဖွဲ့စည်းပုံ၏သိမ်းယူမှုတစ်ဦးလျှင်မြန်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ် endoplasmic reticulum ဖြစ်ပွားနေသော trimers သို့ Phaseolin အမှုန့် subunits ပရိသတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ bean ကိုခုနှစ်တွင် cotyledonary ဆဲလ် Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့် trimerization ဆယ်လူလာအချက်များအားဖြင့်ကူညီခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်နဲ့ N-နှင့်ဆက်စပ် glycosylation ၏ inhibitors ၏မျက်မှောက်၌လည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအတွင်းသို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအစောပိုင်းအခန်းအတွက် unassembled subunits ၏ retention ကိုရန်နှင့်စည်းဝေးပွဲကို Intermediate ၏ကျိန်တစ်ဦးကယန္တရားပရိုတိန်းသာ protease ယဉ်ပုံစံသိုလှောင်မှုပရိုတိန်းစုဆောင်းခြင်း၏ခြုံငုံထိရောက်မှုဖို့အထောက်အကူပြုသိုလှောင် vacuoles ပို့ဆောင်ကြောင်းအာမခံလိမ့်မယ်။
ကုန်ကြမ်း Phaseolin အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
သီအိုရီ phaseolamin ရဲ့အင်ဇိုင်း-blocking အင်အားကြီးခန္ဓာကိုယ်အဆီသို့စုပ်ယူနိုင်ပြီးကူးပြောင်းဖြစ်ကြောင်းဘိုဟိုက်ဒရိတ်-based ကယ်လိုရီ၏နံပါတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ကြားသို့ကစီဓါတ်ဖြိုဖျက်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး, အစာခြေစနစ်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြေညက်ကစီဓါတ်အတှငျး။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု phaseolamin အားဖြင့်အဝလွန်ပါဝင်သူများ၏ခြုံငုံအလေးချိန်နှင့်ခါးအရွယ်အစားလျှော့ချ, ရှုပ်ထွေးကစီဓါတ်များအစာခြေဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးစေသည်ဆိုခဲ့။ ထိုကဲ့သို့သော orlistat (ကုန်သွယ်ရေး name ကိုမဟာမိတ်များ) အဖြစ်အချို့သောအဆီ-blocking counterparts တွေကိုကြောင့်သူတို့ရဲ့အင်ဇိုင်း-blocking လှုပ်ရှားမှုမှမနှစ်မြို့ဖွယ်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထုတ်လုပ်သော်လည်းအများစုကလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ phaseolamin အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်အစာအိမ်နာကျင်မှုတစ်ခုအတော်လေးနိမ့်ဖြစ်ပွားမှုသရုပ်ပြပါပြီ။
အဖြူကျောက်ကပ် bean ကိုထုတ်ယူသည့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များစုပ်ယူမှုနှင့်ရိုးရှင်းတဲ့ကြားသို့၎င်းတို့၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူနှောင့်ယှက်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဓာတ်ပြု hypoglycemia များအတွက်အလားအလာကုသမှုပူဇော်စေနိုင်သည်။ ဒေါက်တာဂျေး Udani-ဆေးပညာ Medicus သုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏ 2007 တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယားလေ့လာမှုကိုရေးသားသူ (CAS 13401-40-6) -has ဝင်းထိုကဲ့သို့သောအဖြူရောင်မုန့်အဖြစ် starchy အစားအစာများ၏များသောအညွှန်းကိန်းကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းအကြံပြု ။ ဤအအစားအစာကနေဂလူးကို့စရယူထားခြင်းမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကို impairing အသုံးပြုပုံ Phaseolin အမှုန့်သွေးသကြားဓာတ်အတွက်ရုတ်တရက် spikes တားဆီးများနှင့်ပြဿနာများရရှိလာတဲ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြည့်စွက်တုံ့ပြန် hypoglycemia (Pre-ဆီးချိုရောဂါ) နဲ့လူအမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါစတင်ခြင်းတားဆီးသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ ဤအသီအိုရီအသုံးပြုမှုအလားအလာထင်ရပေမယ့်သူတို့ကအကြီးစားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။
Phaseolin အမှုန့်, ​​ဘုံ bean ကို၏အဓိက globin အမျိုးအနွယ်ကိုသိုလှောင်မှုပရိုတိန်း, Phaseolus vulgaris L. , စုစုပေါင်းအမျိုးအနွယ်ကိုပရိုတိန်း၏% 50 ရန်အဘို့အတက်အကောင့်။ အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမျိုးစပါးအတွက် Phaseolin အမှုန့်များ၏လျင်မြန်စွာစုဆောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. 14 ရက်ပေါင်းပန်းပွင့်ပြီးနောက်စတင်များနှင့်မဟုတ်တော့တချို့ 12-14 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်စတင်ခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲ, အရှည်, ရပ်စဲနှင့်ပေါင်းစပ်၏နှုန်းမှာဆက်စပ်သော Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်စုဆောင်းခြင်း၏ပမာဏနှင့်မှုနှုန်း, genotype အကြားကွဲပြားပြပြီ။ အဆိုပါ cultivars Tendergreen, Sanilac နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပြီးနောက် T က, S, နှင့် C designated သာလျှင်3Phaseolin အမှုန့် electrophoretic အမျိုးအစားများ, အသီးသီး Access စိုက်ပျိုး 100 ကျော်အကြားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
မော်လီကျူးအလေးနှင့် Phaseolin အမှုန့်များ၏ 14 ပရိုတိန်း polypeptides ၏ isoelectric မှတ်၏ကျဉ်းမြောင်းသောပ္ပံအဖြစ် peptide မြေပုံကနေကြည့်ရှုလေ့လာသည့် homology, အ Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့် polypeptides အလားတူပရိုတိန်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သုံးယောက် electrophoretic ပုံစံများရှိခြင်း cultivars အကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးအဆိုပါ Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ polypeptides ထိန်းချုပ်ထားသည့်မျိုးဗီဇတင်းကျပ်စွာ, နှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့လုပ်ကွက်အတွက်အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့် alleles codominant နေကြသည်ခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဒုံးပျံ immunoelectrophoresis သုံးပြီးခန့်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံ Phaseolin အမှုန့်အကြောင်းအရာအတွက်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲ, bean ကိုလိုင်းများအကြားတွေ့ရှိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးခွဲခြားလူဦးရေဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အရေအတွက်အမွေဥစ္စာကိုပြသပေမယ့်, တိုးမြှင့် Phaseolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်စုဆောင်းခြင်းရှိခြင်းအချို့ inbred backcross လိုင်းများကိုအဓိကသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအနည်းငယ်ဗီဇသယ်ဆောင်ရန်ပေါ်လာပါသည်။ ပုံမှန်အဆင့်ဆင့်၏ထက်လျော့နည်းတတဝက် Phaseolin အမှုန့်ပမာဏ es လျှော့သောတစ်ခုတည်းသောဗီဇရိုင်း P. vulgaris တစ်ခုနိုင်ရေးအတွက်မကြာသေးမီကဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Phaseolin အမှုန့်ရော် Powder (CAS 13401-40-6)
ကုန်ကြမ်း Phaseolin အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Phaseolin အမှုန့် (CAS 13401-40-6) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Phaseolin အမှုန့်ရော် Powder ချက်ပြုတ်နည်း